UMadonsela weluleke uZuma ngokuthi angazami ukuphikisa isinqumo senkantolo | isiZulu
UMadonsela weluleke uZuma ngokuthi angazami ukuphikisa isinqumo senkantolo
'UMvikeli woMphakathi akanawo amandla okuyalela uZuma ukuba enzeni'
Sizoqala namuhla ukulalelwa isicelo enkantolo sikaZuma ngombiko kaMadonsela
I-EFF ithi akasule esikhundleni uMvikeli woMphakathi
Johannesburg – Lowo owayenguMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela weluleke uMengameli Jacob Zuma ngokuthi angazami ukuphikisa isinqumo seNkantolo eNkulu yaseNorth Gauteng.
"Unelungelo lokudlulisa isinqumo ngalolu daba uma ecabanga ukuthi isinqumo siphambene nomthetho futhi wephucwe ilungelo lakhe.
“Kodwa uma ekwenza lokho kumele acabange ukuthi kusho ukuthini ezweni ukuhlala nalezi zinsolo ze-state capture, neKhabhinethi alingawenzi umsebenzi walo, uhulumeni ongawenzi umsebenzi kanjano ne-ANC,” kusho uThuli Madonsela.
OLUNYE UDABA: Inkantolo imchithile uZuma
"Ngaphezu kwakho konke, ukuhamba kosuku kusho ukulahleka kobufakazi. Kuzothi sekwenziwa uphenyo ubufakazi obuningi kuzobe bungasekho uma,” esho. UMadonsela uphinde wacela izikhulu zikahulumeni ukuba zihloniphe isinqumo senkantolo.
UJaji Dunstan Mlambo ngoLwesithathu unqume ukuthi uZuma kuzomele aphinde akhokhele izindleko zecala ngokwehluleka kwakhe emizameni yokuvimbela umbiko we-State of Capture.